May Nyane: အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အနာ(အပိုင်း-တစ်)
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြောင့် ပိတ်ထားရတဲ့ ကျောင်းတွေ ၁၉၉၁ နှစ်လယ်မှာ ပြန်ဖွင့်တော့ စစ်အစိုးရဟာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စနစ်တကျ ဖျက်ဆီး လာပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် တက်လာ… စာသင်နှစ် (Academic Year) တစ်နှစ် ကို ၆လလို့ လျှော့ချ။ သင်ရိုးတွေကိုတော့ မလျှော့..။ ဒီတော့ ဆရာဆရာမတွေလည်း ပင်ပန်း။ ကလေးတွေလည်း စာမတတ်။ ထွက်လို့ရတဲ့ တံခါးပေါက်က ကျူရှင်နဲ့ အဂတိ လိုက်စားတာပဲ ဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့။ သူတို့ မျှော်မှန်းတဲ့ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းဆီ တကယ် ဦးတည် လာ တာပါပဲ..။
အဲဒီအခါ…ကလေးတွေကို တကယ်စာတတ်စေချင်ပြီး သင်ကြားရေးကိုသာ အားစိုက် လုပ်ချင်တဲ့..၊ ကိုယ်ရတဲ့ လစာလေးနဲ့ တပည့်တွေကို စာသင်ပြီး အိနြေ္ဒရရ အေးအေး ချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့.. ဆရာ ဆရာမတွေ အသည်းကွဲ ရတဲ့ အချိန်တွေ အစပျိုးလာတဲ့ နှစ်တွေပေါ့။ အဲဒီ ပျက်စီးခြင်းဟာ ဟိုး..အောက်ခြေ မူလတန်းကနေစလို့ ထိပ်ပိုင်း တက္ကသိုလ်တန်း မဟာတန်းတွေထိ ရိုက်ခတ်လာတဲ့ လှိုင်းတွေ။
စာမေးပွဲမှာ ခိုးချဖြေတာက အစ… ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ မထင်တော့အောင်၊ အရာရာ ငွေရှိရင် ဖြစ်တယ်.. ပညာဆိုတာ ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ဖြစ်လာအောင်၊ ခိုးတယ် ဆိုတာကို ဘာမှ မထူးဆန်းတော့အောင်.. ရိုးသွားအောင်၊ ပြီးတော့ ပညာတတ် တွေကို လက်စတုံး စီရင်ဖို့.. စစ်အစိုးရရဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ (အလွယ်တကူ စွပ်စွဲလို့ မရအောင် သေချာ အကွက်ချ စီစဉ်ထားတဲ့) လုပ်ကြံမှု တွေ.. အဲဒီ နှစ်ပိုင်းမှာ စလာတာပါပဲ။
အဲဒီအချိန်လောက်မှာပဲ စာရေးဆရာတွေရဲ့ စာတွေကိုလည်း စာပေစိစစ်ရေးဆိုတဲ့ ပါးကွက်အာဏာသားက အပိုင်းပိုင်း အတစ်တစ်ဖြစ်အောင် ခုတ်ထစ် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အချိန်တွေပေါ့။ ကျမတို့ စာရေးဆရာတွေမှာ အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ် ရေးကြရတာ။ ကျမလည်း ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ.. ပညာရေးလောက ပျက်စီး လာတာတွေ.. လှည့်ပတ် ရေး။ အတားအဆီး ခံရ.. အဆုတ်အဖြဲ ခံရ..ခဏ ခဏ..။ တခါတော့ ပညာရေးလောက ပျက်စီးလာတဲ့အကြောင်း နဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ၀တ္ထုတိုလေးတပုဒ် ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ၀တ္ထုလေးလည်း အကြိမ်ကြိမ် အတားခံရတိုင်း အမျိုးမျိုး ပြန်ပြင်ပြီး ရေးပို့ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကံကောင်းထောက်မပြီး စိစစ်ရေး က လွှတ်လိုက်လို့ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း (လ မမှတ်ထားမိ) မှာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အနာ ၀တ္ထုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်ရယ်.. အဲဒီ ၁၉၉၇ အောက်တိုဘာမှာ ပဲခူးတိုင်း ရေကြီးတဲ့အကြောင်းကို မြားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်းမှာ ၀တ္ထု ရေးတော့ ထပ်ပြီး ဆုတ်ဖြဲခံရတဲ့ ပြဿနာ ရယ်… နောက်တော့ ၁၉၉၇ နိုဝင်ဘာမှာပဲ ဗိုလ်မှူးကြီးဖေငြိမ်းက သတင်းစာတွေထဲမှာ တက္ကသိုလ် မေငြိမ်း ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့ ဆောင်းပါး ရေးတောု့ ကျမက အဲဒါ ကျမမဟုတ်ကြောင်း ကလောင်နာမည်တူသာဖြစ်ကြောင်း.. ဂျာနယ်၃စောင် ကနေ ပြန်ရှင်းရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စတွေရဲ့ အဖြေကတော့ အဲဒီတုန်းက စာပေ စိစစ်ရေး ရဲ့ အာဏာရ ပါးကွက်သား ဗိုလ်မှူးတင်စိုး(ကလောင်အမည် နွယ်သာကီ)က ကျမကို ခေါ်တွေ့ပြီး ကျမရဲ့ ကလောင်နာမည်ကို အချိန် အကန့်အသတ် မရှိ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ဒီ အမေတစ်ယောက် ရဲ့ အနာ ၀တ္ထုကို အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ စေတနာကို အထင်လွဲမှားစေတဲ့ ၀တ္ထု ဖြစ်နေလို့ ပါတဲ့။
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ခေတ်တခေတ်ရဲ့ မှတ်တမ်းလေးအနေနဲ့ ဗဟုသုတအဖြစ် သိစေချင်လို့ ပြန် ပြောပြတာပါ။ ၀တ္ထုကလည်း အတိုဆိုပေမဲ့ ရှည်နေလို့ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပါဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတခါတော့ နှစ်ပိုင်းစလုံးကို တပါတည်း ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ ဖတ်ရအောင် တခါတည်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(ပန်းချီဇော်မောင်ရဲ့ မူရင်း သရုပ်ဖော်ပုံပါပဲ)
မြစ်တို့ သန်မာစွာ စီးဆင်းနိုင်ဖို့လေ။
ပန်းကလေးတွေ လန်းရင် ပြုံး
ပန်းကလေးတွေ နွမ်းတော့ နုံးလို့
ဒါတွေဟာ ဆရာတို့စပ်တဲ့ ကဗျာ
ရင်ထဲရှိ ထုထည် အစိုင်အခဲတို့ တစစီ ပြိုကွဲ ကြေမွလာကြသလို ခံစားရ၏။ လက်ထဲမှ ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ထားသည့် စာရွက်များက မျက်လုံးအမြင် မှာေ၀၀ါး။ နှုတ်ခမ်းကို ဖိကိုက် မျိုသိပ် ထားသည့်ကြားမှပင် ရှိုက်သံ တိုးတိုး ထွက်ချင်သေး ၏။ ‘ကျမသည် ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့ပါ သဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန၏ လက်ထောက် ကထိက ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုပါရန်’ မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်တွေကို ကျမ အလွယ်တကူ မတားဆီးနိုင်တော့ပါ။ ရေးလက်စ ဖေါင်တိန်ကို အဖုံးပိတ်ကာ ကျမ အားပါးတရ ရှိုက်ငင် ငိုကြွေးပစ်လိုက်မိတော့သည်။
အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကဗျာရေးဖက် သူငယ်ချင်း ညလယ်မိုး ၏ ကဗျာကလည်း ကျမရင်ကို နာကျင်အောင် ထိုးနှက်သော လက်နက်များလို….။ ပြီးတော့ ကဗျာထဲက စကားလုံးတွေကလည်း ပြေးထွက်လာပြီး အပြိုင် အဆိုင် ရှိုက်ငင် ငိုကြွေးကြသေးသည်။ ဘယ်သူ့ကို တောင်းပန်ရပါ့မလဲ။ "ကျမကို ခွင့်လွှတ်ပါ".....။
ပြုံးရယ်ရွှင်ပျလျက် ပေါ့ပါးဖျတ်လတ်သော မျက်လုံးများစွာ၏ ရှေ့မှောက်မှာ ကျမ ပျော်ခဲ့ရဖူးတာ ဆယ်နှစ် ဆယ်မိုး…။ စာသင်ရလို့များတော့ ကျမမှာ မောတယ် ပန်းတယ် ဆိုတာ မရှိဖူးခဲ့။ ကျမ ပြောချင်တာတွေ၊ သိစေ ချင် တာတွေ.... “ကလေးတွေရေ ‘ကဗျာ’ဆိုတာ စေတနာတွေကို သာယာနာပျော်ဖွယ် စကားလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထား တဲ့ ‘အလှတရား’ တစ်ခုပါပဲ။ ကဗျာ ဆိုကတည်းက စေတနာဆိုတဲ့ ဂယက်အနက်က တွဲ ပါ ပြီးသားပဲ။ လောက ကောင်းကျိုး၊ ဘ၀ ကောင်းကျိုး၊ အနည်းဆုံးတော့ လူတစ်ယောက် အတွက် ကောင်းကျိုိးဆိုတဲ့ စေတနာတွေကို ကဗျာတွေက ပြဋ္ဌာန်းတယ်။”
အမေးအမြန်းထူ(ထက်မြက်)တဲ့ ကလေးမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရရင် ကျမရဲ့ စာသင်ချိန်တွေက ပိုတောင် ပျော်စရာ ကောင်းသေး။ စာ အင်မတန် မေးတတ်တဲ့ ကျမနဲ့၊ ဆရာ ပေး သလောက်ကို လက်ပိုက် ခံယူရတာထက် ပိုလို ချင်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ တုံ့ပြန် ဆွေးနွေး မှုတွေနဲ့ဆို ကျမရဲ့ စာသင်ချိန်တွေက ဝေစည်မြဲ။
တခါတလေများ ‘ဟီရိ နဲ့ သြတ္တပ္ပ’ ဆိုတဲ့ စကားလေး နှစ်လုံးတည်းနဲ့တင် စာသင်ချိန် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်စာ ကုန်လောက်အောင်၊ ကလေးတွေက အမေးအမြန်း ထူတတ်သေး တာ။ ‘မကောင်းမှုကို လုပ်ဖို့ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း’ ဆိုတဲ့ အဖြေကို သာဓကတွေ ဥပမာတွေနဲ့ သေချာ ရှင်းပြကာမှ သူတို့က ပြုံးရယ်ရွှင်ပျနဲ့ ကျေနပ်ကြတာ။ အဲဒီ အချိန်တွေမှာ ကျမ ဘယ်လောက် ကြည်နူးခဲ့ရဖူးသလဲ။ တကယ်ပဲ၊ တတ်နိုင်သလောက် အင်အားနဲ့ ကျမ ရွာချ ပေးခဲ့ဖူးတာ… မိုးရေစက်များစွာ… မြစ်တို့ သန်မာစွာ စီးဆင်းနိုင်ဖို့လေ။
အဲဒီအခါ ‘မကောင်းမှု’ ဆိုတာကို၊ ‘ဟီရိ’ ဆိုတာကို၊ ‘သြတ္တပ္ပ’ ဆိုတာကို ခွဲသိသွားတဲ့ ကလေးတွေက လောကထဲမှာ ကောင်းမှုကို ရှာဖွေကျင့်ကြံဖို့တော့ မြင်တတ် သွားကြမှာ ပဲဆိုတဲ့ ပီတိကို ကျမ စားသုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ "မကောင်းမှု ကျူးလွန်နေတာကို ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ပိုက် ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ မကောင်းမှုကို အားပေးရာ ရောက်တယ်" လို့ သူတို့ကို ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆုံးမ တဲ့ အခါလည်း သူတို့ မျက်နှာလေးတွေက တည်ကြည် လေးနက်လို့။ ကျမမှာတော့ ကျမ ရဲ့ "မြစ်" တွေ သန်မာ အားကောင်းပြီရယ်လို့ အားတက် ပျော်မွေ့ ။ အနာတရတွေကို မေ့လို့။
အဆုပ်ရောဂါ နဲ့ ကျောင်းဆရာအလုပ်ဟာ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေပဲလို့ ကျမပြောတော့ တပည့်အချို့က ငိုချင်သတဲ့။ ကျမကတေ့ာ ဆေးရုံက ၀ယ်ခိုင်းတဲ့ တီဘီဆေးတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို သိရကာမှ ငိုချင်။ ဒါပေမဲ့ ‘ချောင်းဆိုးသွေးပါ’ အဆင့်မှ မဟုတ်သေးပဲလေလို့ ပေခံ။ တစ်လ တစ်လ စားစရိတ်၊ သားလေးရဲ့ ကျောင်း စရိတ်၊ အထွေထွေ အသုံး စရိတ်၊ ကျမမှာ ပေါင်နှံ ရောင်းချစရာ မိဘအမွေ မရှိ။ လက်ဖြန့် တောင်းခံစရာ လင်သား မရှိ။ ဆရာသိန်းဖေမြင့် ကတော့ ‘ ဒုက္ခကို ခုခံရင် အရည်အချင်း တိုးတက်တယ် ’ တဲ့ ။
စာသင်ရင်း မောပန်း။ ညနေ ညနေ… အဖျား။ အားအင် ကုန်ခန်း။ အသံခြောက်ခြောက် ချောင်းမျိုး ဆိုးလာ ချိန်မှာတော့ သားလေး အနားပင် ရဲရဲ မကပ်ဝံ့ပြီ ။ တဖြည်းဖြည်း ဖြူဖျော့ နွမ်းလျလာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်ရင်း အံကို နာနာခဲ။ ခုတော့၊ ညနေတိုင်း ရှိနေကျ ကိုယ်ပူချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီ ဖါရင်ဟိုက်ကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အပူချိန်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ရင်း ခုတော့ ထုသား ပေသား ကျ။ အသည်းနှလုံးတို့ မာကျော၊ အစာအိမ်တို့ မာကျော။
စာသင်တာကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်.. တပည့်တွေအတွက် ငါရှိမှ ဖြစ်မယ်လို့ ထင် တဲ့ ဘ၀င်ခပ်မြင့်မြင့် မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်… ဒါဟာ ကိုယ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ပြုခြင်း တစ်မျိုးပဲလို့ ကျေနပ် ချင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်အတွက်…။ လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အဆောက်အအုံထဲက အုတ်တစ်ချပ် ဖြစ်ချင်တဲ့ မိန်းမအတွက်….
အဲဒီ မာမာကျောကျောမိန်းမက တပည့်တွေနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေထဲမှာတော့ အလွန် ပျော့ညံ့စွာ မျက်ရည်ကျတတ်လေသည်။
“ကျနော် လိုချင်တာ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခု မဟုတ်ဘူး ဆရာမ… ၊ အသိပညာကို လိုချင်တာ”
“ကျနော်တို့က မှတ်စုကိုပဲ လိုချင်တာ။ ရှင်းပြမနေပါနဲ့ ဆရာမရယ်၊ မောပါတယ်”
“ဓမ္မပဒ ကို သေသေချာချာ ပြဋ္ဌာန်းရင် ဗြဟ္မစိုရ်တရား ထွန်းကားမှာပဲနော် ဆရာမ။ အဲဒါဆို ကျနော်တို့လို ငမွဲ တွေ တော်တော် အသက်ရှု ချောင်မယ်”
“တကယ်တော့ မြန်မာစာဟာ Social Studies ပဲဆိုတာ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက် တဲ့ အချိန်မှာ တာဝန်ကလဲ သိပ်ကြီးလာတာပဲနော် ဆရာမ”
“ပညာတတ်တာ မကောင်းပါဘူး ဆရာမရယ်… အမြင်ကျယ်လာတော့ ပို ငတ်တတ်လာ တယ်”
“ဘွဲ့ရ ပြီးလဲ ကားမောင်းရမှာပါပဲ ဆရာမရယ်…ဒါမှမဟုတ် ကုန်ကူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘွဲ့တစ်ခု ရထားတော့ သူများ နဲ့တော့ ယှဉ်နိုင်တာပေါ့ ။ ဆရာမပြောသလို ကျနော်တို့ခေတ်မှာ တက္ကသိုလ် ဘ၀၊ တက္ကသိုလ် အရသာ ဆိုတာ ကို သိပ်မခံစားရလည်း Society ကိုတော့ ပိုသိသွားတာပဲ”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ဆိုတာထဲမှာ ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်ဖို့ပါပဲကွယ်…ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ ဗေဒါလမ်းကဗျာဟာ မင်းတို့နဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ အားမာန်အတွက် အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး ကဗျာပဲ။ မင်းတို့အတွက် ဆရာမတို့ ပေးနိုင်တာ ခွန်အားပါပဲ။ အသိဥာဏ်ပညာဆိုတာ ခွန်အားပဲလေ…”
အဲသည်တုန်းကတော့ ကျမကိုယ်တိုင် အားမာန် အပြည့်။ စာတွေ အော်ဟစ်သင်ရင်း ရင်ခေါင်းထဲက နာလည်း အပြုံး မပျက်။ တပည့်တွေက ဆရာမကို မြင်ရရင် စိတ်ထဲ သိပ်တက်ကြွပြီး သိပ်အားရှိတာပဲ တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ကျားကန် ပြုံးရယ်..။
ပန်းကလေးတွေ လန်းရင် ပြုံး
ပန်းကလေးတွေ နွမ်းတော့ နုံးလို့။
Don't you love it that no one can censor you on the Internet? :) Now your imagination is your limit. :) Good luck.